तपाईलाई थाहा छ मन्दिरमा नरिवल किन फुटाइन्छ ? यस्तो छ कारण ! - SAMACHAR SANJAL
तपाईलाई थाहा छ मन्दिरमा नरिवल किन फुटाइन्छ ? यस्तो छ कारण !
अन्तत ओलीले गरे अचम्मै !प्रचण्ड बन्ने भए भोलिनै पार्टी अध्यक्ष